Rehefa Hihaona amin’ny Ray aman-dreny: Ahoana no tsy ho Ela dia Ela Loatra eo amin’ny Fifandraisana
Rehefa ny fifandraisana dia mandeha tsara, tamin’ny fotoana sasany dia mety manapa-kevitra ny hampiditra ny manan-danja hafa ny ray aman-dreny. Fa ahoana no tsy ho ela dia ela loatra ho an’ny fivoriana ny ray aman-dreny? Misy zavatra azonao atao mba ho azo antoka ny fivoriana mandeha tsara? Misy ny zavatra manan-danja hafa tsy afaka manao? Tena nisy marina dia tsy mahatoky ny valiny toy ny rehefa manana ny manan-danja hafa «hihaona amin’ny ray aman-dreny». Misy na dia izany aza, misy zavatra vitsivitsy mba diniho: tsy hampiditra olona iray dia tsotra mampiaraka ny ray aman-dreny. Raha toa ianao ka tsy amin’ny fomba ofisialy ao amin’ny fifandraisana amin’ny olona dia ny teny fampidirana ny ray aman-dreny mety hanimba amin’ny fomba roa: Rehefa Tokony ho Ny Mpiara-miasa Hihaona Ny Ray aman-dreny? Eto dia ny Fomba Ny Lazao ry zareo Vonona Ny antony hafa tsy tokony hampidirana ny tsotsotra ny fiarahana buddy ny ny fianakaviana dia satria mandefa mampisafotofoto hafatra ho an’ilay olona ianao mampiaraka. Isika, na dia tsy izahay tsotsotra? Raha te-hitandrina ny zavatra tsotsotra avy eo dia ray aman-dreny fampidiran-dresaka milaza ny mifanohitra amin’izany. Ary raha toa ka te-hahazo lehibe kokoa, ny ray aman-dreny ny teny fampidirana dia ny fametrahana ny sariety talohan ‘ ny soavaly. Tsy hampitahorana ny tsotsotra ny fiarahana mpiara-miasa izy. Hanome ny fifandraisana fotoana mba lasa ny fifandraisana voalohany. Ny Fiarahana Amin’ny Fanantenana Avo Loatra? Raha toa ianao ka amin’ny fifandraisana avy eo dia manapa-kevitra, rehefa hampahafantatra ny manan-danja hafa ny ray aman-dreny dia miankina amin’ny andaniny sy ny fikasany sy ny maha zava-dehibe ny fifandraisana sy ny casualness ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny ireo fa ny lehibe. Raha izaho hitondra olona an-trano mba hitsena azy izy ireo dia mihevitra aho fa matotra ny olona iray. Ny fahafantarana izany, dia ho afa-hampahafantatra ny olona ny ray aman-dreniko raha ny fifandraisana dia tena lehibe. Ny mifanohitra amin’izany, dia efa eo amin’ny fifandraisana amin’ny olona manana ray aman-dreny be dia be kokoa tsotsotra. Nihaona ny ray aman-dreniny, raha ny fifandraisana dia mbola tena vaovao na andavanandro na izany aza anefa ny fanasana hihaona an’ny ray aman-dreniko no tsy maharitra. Rehefa nanazava fa izaho ihany no hampahafantatra sipa ho ny ray aman-dreny, raha ny fifandraisana dia tena lehibe, izany indraindray tohina ny olona. Jereo ny Vanim-potoanan’ny Tantara ny Tompon-Tsy rehefa Rachel fanontaniana dia Dev momba ny fivoriana ny Indiana ray aman-dreny.
Raha toa ka hafahafa, tsy te-ho manao na inona na inona izay tsy te-hanao izany. Fa izany dia mahatonga ahy hahatsapa toy ny ianao, menatra aho na zavatra. Jereo, izany no samy hafa, okay? Ianao, raha olona fotsy sy ianao mampiaraka amin’olona ianao, dia vao hiantso ny ray aman-dreninao sy hilaza aminy, Eny, izaho mampiaraka io olona io, ary izy ireo dia tahaka ny, Oh, lehibe. Mamelà ahy hanasa azy sy hamahanana azy, toy ny akoho sy ny dumplings.
Mazava ny Famantarana ny Fotoana mba Hihaona amin’ny Ray aman-dreny ny Fomba anjara ny ray aman-dreny ny fianakaviana? Ho tia ny hafa manan-danja be loatra ny fihaonana eo amin’izy ireo? Nianarako tany am-boalohany momba izany ny reniko dia nanana ny hery anaty mba «hanambady ny mpiara-miasa». Raha ny lehilahy no tena tsara tarehy, mahay na mpanao fahagagana izy dia misafoaka mafy ny momba azy. Tany am-piandohana, dia ho lehibe, fa izy no nandray izany liana amin’ny fitiavako liana. Fa raha na ny marimarina kokoa, raha ny fifandraisana nandeha marikivy nahatsapa fanampiny very. Ny very i na dia bebe kokoa mainka raha ny rahalahiko efa lasa namany azy ho toy ny basket-monina. Tsy tianao ny fianakaviana mba avia ianao momba ny ratsy fisarahana. Nahoana no tsy afaka manao izany asa izany amin’ny-eo-noho izany? Ary raha toa ka ny mpiara-miasa fivoriana ny ray aman-dreny, dia tsy te-handrava ny fianakaviana manontolo raha toa ka na rehefa ny fifandraisana faran’ny. Ohatrinona moa ve ianao toy ny ray aman-dreny? No tetikasa mitovy hery sy fomba fijery ao aminy, na misy tena mifanohitra eo ny anao sy ny azy ireo? Raha misy mifangarika mety mila fotoana bebe kokoa mba hihamafy ny fifandraisanareo mialoha ny fampidirana ny ray aman-dreny. Amin’ny fiarahana misy buy-ao amin’ny vanim-potoana. Rehetra ny fotoana lany miara-dia fotoana lany subconsciously fanombanana ny mpiara-miasa. Moa ve ianao toy ny azy ireo? Ve ianao mahatsiaro ho tsara rehefa miaraka amin’izy ireo ianao? Afaka mandefitra ny zavatra tsy tianao? Raha toa ianao hampahafantatra ny fianakaviana haingana loatra sy ny tsy mandeha tsara amin’ny mpiara-miasa ny tombontsoa mety manomboka mandresy lahatra kokoa noho ny mety raha ny fifandraisana efa nanam-potoana mba hihamafy. Ahoana No Ahafantaranao Ny Fitiavanao Olona Iray? Aoka àry ny mihevitra mandinika izany rehetra izany, ary manapa-kevitra tonga ny fotoana mba hampahafantatra ny namanao, ny ray aman-dreny. Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy mba ho azo antoka ny mandeha tsara: mirary Soa sy ny manantena aho fa ireo no manampy ny soso-kevitra. Aza adino ny hiverina ary hizara izay niasa ho anao. Hi Laura, heveriko fa tsy misy afaka ny ho iray mifanaraka habe rehetra valiny ho an’ny fanontaniana io. Mieritreritra aho fa tena noho izany dia miankina amin’ny lafin-javatra maro. Ohatra, raha toa ianao ka amin’ny sekoly ambony dia mety mila mba hihaona amin’ny ray aman-dreny super tany am-boalohany ho an’ny fahazoan-dalana aza ny daty. Izany ihany koa raha toa ianao ka tena nentin-drazana ara-pinoana ny fianakaviana. Mihevitra ho manana ho ianao ka olon-dehibe fa tsy ny tanora te-hiteny aho ny volana dia mety ho fa lava na fohy fa arakaraka ny toe-javatra. Dia izany ny fitenenana mahazatra daka-izany olon-tiany, na ny lehibe ny olon-tiany? Ho an’ny olona maro volana no fe-potoana ilaina ho fantatra raha tena tianao ny olona iray na tsia. Matetika rehefa amin’ny volana marka fantatro ny olon-tiany fa tsy mendrika tsara aza raha izany dia nitondra ahy iray volana vitsivitsy mba hiantso raha rehetra eny. Toy izany koa raha toa ka fantatro fa izy no mendrika tsara taorian’ny volana dia tiako ny manomboka ny tetezamita ho any amin’ny lehibe kokoa ny fomba fisainana raha tsy voaraiko sahady. Raha jerena ny fivoriana ny ray aman-dreny anontanio ny tenanao zavatra vitsivitsy: mahatsapa Ve ianao vonona ny hihaona aminy? Raha tsy izany, nahoana no tsy? Satria ny fifandraisana dia tsy vonona na dia misy anton-javatra mahatonga anao tsy te izay tsy miankina amin’ny fifandraisana? (I. e sakana ara-pitenenana, ara-poko, ara-politika, ny fahasamihafana, sns.) Raha io farany io dia ireto no zavatra mba hifanakalo hevitra amin’ny mpiara-miasa alohan’ny fivoriana ny ray aman-dreny.
Tsy hisorohana na ny fanemorana azy
Koa, manontany ny olon-tiany raha indrindra ny vehivavy sakaizany matetika hitsena ny ray aman-dreny. Aho vao mijery ny vanim-potoana ny Tompon-Misy sy ny Serasera dia manazava ny fomba ao Indiana ny fianakaviana fotsiny tsy hampiditra olona rehetra ianao mampiaraka ny ray aman-dreny toy ny manao fotsy ny fianakaviana. Toy izany koa tena mandeha ho Silamo ny fianakaviana. Raha toa isika ka hitondra olona an-trano ny fiheverana fa isika dia tsy maintsy mihevitra ny fanambadiana, dia tsy maintsy ho lehibe. Fa fianakaviana maro no tsy misy fiheverana ny hafa koa, «ry ray aman-dreny hihaona ny olon-tiany». Ka miezaka mba hijerena izay ny fihaonana tamin’ny ray aman-dreniny dia midika hoe ny tontolo izao. Angamba tena marina dia tsy misy tena olana, na angamba izany. Toy izany koa raha toa ianao ka tsy vonona ny hanana azy hihaona amin’ny ray aman-dreny ho tena mangarahara ny antony. Mora ny hanao ratsy olona na tsy ho azon’ny olona raha tsy manazava ny antony mahatonga izany ela loatra. Nihaona ny vady ny ray aman-dreny tena tara any ny fifandraisana saingy satria izy dia niaina tena lavitra sy noho fihaonana azy ireo te hilaza ny fanambadiana dia akaiky. Aza misalasala mailaka amiko mivantana sy hizara ny antsipiriany kokoa ny toe-draharaha noho izany dia afaka manome anao ny manokana bebe kokoa ny toro-hevitra. Mirary soa sy ny fisaorana ho an’ny manolo-tanana. Tena ho epically sahiran-tsaina, fiarahana sisa velona nivadika Vady & Neny. Aho, bilaogy momba ny rehetra ny disconnects eo ny fiarahana, manome toro-hevitra (avy amin’ny lafiny hafa), mba hanampy tokan-tena mahita ara-pahasalamana, sambatra, maharitra ny fifandraisana
Chat room ao amin'ny Fitsapana desambra →